Halyeygii Reer Argentina Ee Diego Maradona Oo Loo Magacaabay Madaxweynaha Koox Ka Dhisan Qaaradda Yurub – GOOL24.NET
Halyeygii Reer Argentina Ee Diego Maradona Oo Loo Magacaabay Madaxweynaha Koox Ka Dhisan Qaaradda Yurub
Halyeygii reer Argentina ee Diego Maradona ayaa loo magacaabay madaxweynaha kooxda Dinamo Brest ee ka dhisan waddanka Belarus, taas oo uu qalinka ugu duugay heshiis saddex sannadood uu ku maamulayo.
Diego Maradona oo ay da’diisu tahay 57 jir, ayaa shaqada la wareegi doona marka uu dhamaado Koobka Adduunku, waxaana uu u halgami doonaa inuu naadigaas ka dhigo mid ka mid ah naadiyada dalkaas ugu dagaallama tartamada Yurub ee Europa League ama haddii ay suurtogasho Champions League.
Maradona ayaa bishii hore iska casilay kooxda Al Fujairah ee dalka Imaaraadka Carabta oo uu tababare u ahaa, kaddib markii uu ku fashilmay inuu kasoo saaro heerka labaad, taas oo laba sannadood oo uu maamulayey kasoo bixi kari weyday Serie B.
Ka hor intii aanu ku biirin Al Fujairah, waxa uu sannad tababare u ahaa kooxda Al Wasal.
Diego Maradona wakhtigii uu ciyaartoyga ahaa, waxa uu u ciyaaray kooxaha Napoli oo uu guulo badan gaadhsiiyey iyo Barcelona, hase yeeshee xusuusta ugu weyn waxa loogu hayaa Koobkii Adduunka ee 1986 oo gool gacan uu ku dhaliyey uu koobka kaga qaaday waddanka Ingiriiska.
Inkasta oo dadka Argentina u haystaan halyey, haddana sannadihii 2008 iyo 2010 oo uu tababarayey xulka dalkiisa, waxa uu ku fashilmay inuu horumar gaadhsiiyo, gaar ahaan Koobkii Adduunka ee lagu qabtay Koonfur Afrika oo wakhti horeba ay soo hadheen.
Kooxda yar ee Dinamo waxay ka dhisan tahay magaalada Brest oo ku taalla Koonfurta bari ee dalka Belarus, waxaanay dhacdaa xuduudka Poland.
Xili ciyaareedkan, kaalinta siddeedaad ayay ka gashay horyaalka waddanka Belarus, waxaase ay finalka koobka dalkaas Sabtida la ciyaari doontaa Bate Borisov oo marar badan kasoo qayb-gashay Champions League.